Mota Sevhisi Zvishongedzo fekitori, Vatengesi - China Mota Chigaro Chishongedzo Vagadziri
Akanaka Mushandisi Mukurumbira weChina Mugadziri Mutengesi PU / PVC Yakagadzirwa Leather yeCar Seat Cover
Chigaro chemotokari chinofukidza ndicho chikuru mutengi zvinhu zvevaridzi vemota. Sarudza yakasununguka, inoshanda mota pamutsago zvinoenderana nemwaka zvakanyanya kukosha. Ikozvino pane reganda, superfiber dehwe, chakagadzirwa nedehwe, nylon, chemakemikari faibha, chakagadzirwa mvere, polyester mvere uye zvimwe zvakasiyana zvinhu zvemota zvigaro
Hwakanaka Hunhu uye Yakachipa Mutengo Wemotokari Chivharo
Kana kofi ichidonha pachivharo cheganda remota, pukuta netauro repepa kuti chigaro cheganda chigare chakachena.
Nyore Kuisirwa Universal Auto Leather Seat Mudziviriri Anovhara
Kavha yemotokari sevhavha sekutaurwa kwezita iri chivharo chechigaro chemotokari, chifukidzo chechigaro cheganda chinogona kudzivirira chigaro chekutanga chemota chakaoma uye chakachena, kudzivirira basa reganda rakura.
Yepamusoro Yemhando yepamusoro Kutengesa Isina Mvura Seat Chivharo cheMotokari
Kuvhara chigaro chemotokari kunogona kuchengetedza chigaro chemotokari kubva kukuvara. Bensen ane akasiyana siyana emota zvigaro ekuvhara iwe aunosarudza kubva, saka taura nesu zvino!
Yakachena Ruvara Mota Seat Cushion Provider neChina Fekitori
Kuvhara chigaro chemotokari chinhu chakakosha chikamu chemukati memota, yakavharika chigaro chemotokari inowedzera mufaro wemuridzi panguva yekutyaira. Kana uchida ndapota tizivisei iyo modhi uye isu tinokupa iwe rumwe ruzivo.
Akasiyana Mavara Tsika Leather Auto Mota Seat Mudziviriri Inovhara
Bensen anoshandisa nharaunda inoshamwaridzana nedehwe kugadzira mota matehwe macushion, ayo asingazoburitse hwema hunogumbura uye kuchengetedza hutano hwako.
Kupisa Kutengesa Yakazara Seta Type Yepasi rose Leather Mota Seat Cushion neMota
Chimiro dhizaini zvinoenderana nemamiriro emuviri wemunhu wechigaro chemota anogona kunyatsogadzirisa kuneta kunokonzerwa nekutyaira.
Upholstery Yemota Seat Kuteedzera Leather Mota Chigaro Cushion
Seimwe yezvinhu zvakakosha zvemukati memota, chigaro chemotokari chine basa rakakosha mukukanganisa kwemukati memotokari.
Yakareba Yemukati Zvishongedzo Mota Seats Cushion
Nemaumbirwo matsva emusanganiswa uye akasiyana masitaera, Bensen zvigaro zvemotokari zvinokwanisa kuzadzisa zvakawanda zvaunoda.
Car Yemukati Machira Anodzosera Leather Machira Mota Seat Cushion
Bensen mota dzemakusheni dzinoshandisa zvakatipoteredza PU dehwe, ine European standard yakashata donje machira machira, kunyorova kunyorova uye kufema, mwaka mina yekugara ichipisa, kuwedzera mufaro wako kana uchityaira.
Yakakwira Mhando Yakasarudzika Yakanyanya Kutengesa Yakasimba Chigaro Cushion cheMotokari
Bensen mota dzemakusheni dzinotora nhaka yechinyakare matekiniki ematehwe, akasanganiswa neazvino eesthetic fashoni dhizaini kuratidza yakanyatsonaka uye yakashambidzika premium kugadzirwa.
Auto Shongedzo Mota Kushongedza Chigaro Cushion Yese
Iyo yepasi yeganda yakaburitswa kunze uye inogadzirwa dhizaini, iyo inowedzera zvakanyanya kufema kweganda, mwando dhiraina uye kufefetedza, anti-kutedzemuka uye kusakara-kusagadzikana, uye pakarepo unoona iyo yekutanga mota yemagetsi kufefetedza, kupisa uye mamwe mabasa.